Porn On Brain မှသင်၏ကုထုံးကိုပညာပေးခြင်း
အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောကိစ္စရပ်များအတွက်အကူအညီရယူခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်များစွာသောကုထုံးပညာရှင်များသည်ယနေ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအလွန်စွဲလမ်းစေသည့်မည်သည့်စွဲလမ်းမှုရှိသည်ကိုမျှမသိကြပါ။ အတော်များများသည်ငြိမ်သောအခါ softcore လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သည် Playboy ညစ်ညမ်းခဲ့, နှင့်ရှင်းပြဖို့ကူညီပေးနေကြောင်းမကြာသေးမီကဦးနှောက်သိပ္ပံမတိုင်မီ အနီးကပ်မျဉ်းပြိုင် အလွန်လှုံ့ဆော်သောတ္ထုများနှင့်အပြုအမူများအကြားစွဲလမ်းမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အချို့သောအကြံပေးသူများ၏သင်တန်းကညစ်ညမ်းမှုကိုကုထုံးအဖြစ်အသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။
ငါကုထုံးဆရာတစ်ယောက်ဆီကိုငါလာတဲ့အခါငါကသူမရဲ့လင့်တွေကို porn နှင့်ဆက်စပ်သော ED အကြောင်းဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုပို့လိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်သူကကျွန်မရဲ့စိတ်ထဲမှာမဟုတ်ဘဲတကယ့်ပြသနာပါဆိုတာသူနားလည်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီကိစ္စကိုသွားတဲ့လူတွေအများကြီးကိုသူအံ့သြသွားတယ်။ များစွာသောကုထုံးဆရာများသည်သူတို့၏အလုပ်များကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပြီးညစ်ညမ်းမှုကိုအလွယ်တကူရရှိနိုင်သည့်အချိန်မတိုင်မီအောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းများ၏လေ့ကျင့်မှု / အတွေ့အကြုံအပေါ်သူတို့၏အကြံဥာဏ်များကိုအခြေခံထားကြသည်။ စင်စစ်အားဖြင့် 'skool ဟောင်း' ကုထုံးဆရာများသည်ရှောင်ကြဉ်ရန်အကြံပြုမည့်အစားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမကြာခဏဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ သူမငါ့ကိုသင်ပေးတာထက်ကျွန်မရဲ့ကုထုံးပညာကိုပိုပြီးသင်ကြားတာကိုသူကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးသူမကလခရခဲ့သူဖြစ်သည်။ ဒါဟာယုံကြည်ချက်တောင်းပန်!
သို့တိုင်သူမသည်လှပသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်သဖြင့်ကျွန်ုပ်အလွန်စိတ်မပျက်ခဲ့ပါ။ Plus အား, အင်တာနက်ကို porn တစ်ခုအတော်လေးအသစ်သောဖြစ်ရပ်ဆန်း။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါသည်သင်တို့ကိုတ ဦး တည်းကိုမြင်ရဖို့အကြံပြုလိမ့်မယ်, သူတို့ကကောင်းတစ် ဦး အကဲဖြတ်မဟုတ်သောဆရာအဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
ငါမတိုင်မီသင့်ရဲ့ကုထုံးပညာပေးအကြံပြုပါသည်။ သင်ဝယ်ယူသူဖြစ်သကဲ့သို့သင်၏ကုထုံးသည်သင်၏တောင်းဆိုချက်ကိုလျစ်လျူမရှုသင့်ပါ။ သူသို့မဟုတ်သူမသည်ပြresearနာနှင့်စပ်လျဉ်း။ သင်သုတေသနပြုပြီးဆက်စပ်ကြောင်းထင်ရှားသည့်အခါထိုကိစ္စကိုအလေးအနက်ထားရန် ပို၍ လိုလိုလားလားရှိလိမ့်မည်။ ငါသူမပို့သောလင့်ခ်များကတကယ်ကူညီခဲ့သည်ထင်ပါတယ် ယောက်ျားလေးများစွာကသူမကိုတကယ်ရစေခဲ့သည်ကိုမည်မျှစိတ်ဆိုးမိသည်ကိုတုန်လှုပ်စေသည်
ကျနော့်အမြင်တွင်, ကြိုတင်မဲအတွက်အီးမေးလ်ကတဆင့်ကုထုံးတွေနဲ့ဒီကိစ္စကိုတင်ဆက်လည်းညစ်ညမ်းစွဲနှင့်ဆက်စပ်ရောဂါလက္ခဏာတွေဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်ကနဦးတွန့်ဆုတ် / ရှက်ကြောက်စိတ်ဖျောက်ဖျက်ဖို့ကူညီသင့်ပါတယ်။
A 2008 စစ်တမ်း လက်ထပ်ထိမ်းမြားနှငျ့မိသားစုကုသတို့သည်ညစ်ညမ်းစွဲနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ကြပြီမဟုတ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
အတိအကျ အဲဒီအစား၊ သူတို့က porn ကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာသင်ကြားပေးခဲ့ ထိုကဲ့သို့သောအကြံဥာဏ်သည်ပိုလျှံမှုကြောင့်ဟန်ချက်မကျသေးသော ဦး နှောက်အတွက်အဆင်ပြေပါသည်။ အကယ်၍ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကဲ့သို့သောအရာများမရှိပါကယောက်ျားအများစုသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစွဲလမ်းစေနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ“ သင်ကြိုက်သည့်အတိုင်းလုပ်ပါ” အကြံဥာဏ်သည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်လိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်၏ကုထုံးသည်သာမန်ဖြစ်လျှင်သူတို့၏စွဲပညာရေးသည်နောက်ကွယ်တွင်ရှိသည်။ သူ / သူမဘယ်သောအခါမျှအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်သင်၏သဘာဝအလိုဆန္ဒများကိုကျော်လွှားရန်နှင့်စွဲလမ်းစေရန်စွမ်းအားရှိသည်ဟုတစ်ခါမျှမသင်ဖူးပါ။ သူတို့ကမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်ပစ္စည်းဥစ္စာများဖြင့်သာဖြစ်ပွားနိုင်သည်ဟုထင်ကြပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်“ တစ်စုံတစ် ဦး ကဘာသာရေးအရအရှက်မကွဲပါက” စွဲလမ်းစရာဖြစ်လာနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသူတို့ထင်ကောင်းထင်မည်။ ထို့အပြင်သူတို့သည်“ လာမည့်ရောဂါရှာဖွေရေးအတွက်သတိပြုမိမည်မဟုတ်ပါ။အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ ICD-11 ၌။
လိင်နှင့်အစားအစာသည်စွဲလမ်းမှုကိုမဖြစ်စေနိုင်ဟုယူဆခဲ့ဖူးသည်။ ဦး နှောက်ရဲ့သဘာဝကျေနပ်မှုယန္တရားကသူတို့ရဲ့စားသုံးမှုကိုထိန်းညှိပေးလို့ပဲ။ ဆိုလိုသည်မှာလူများသည်“ အလုံအလောက်” ရှိသည့်အချိန်တွင်ရပ်တန့်မည်ဟုယူဆခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ယနေ့အချိန်၌အလွန်အကံျွတိုးပွားနေသောအင်တာနက် porn - သို့မဟုတ်အညစ်အကြေးများနှင့်မတူပါ။ အမေရိကန်လူမျိုး ၃၀ + ၃၀% သည်အ ၀ လွန်ကြသည် (အစားအစာနှင့်စွဲလမ်းကြသည်) ။ ဒီနေ့ဟာအလွန်များပြားလှတဲ့ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားသူတော်တော်များများမှာအတူတူပါပဲ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အကြားဟန်ဂေရီနှင့်တရုတ်နိုင်ငံတို့တွင်စွဲလမ်းမှုနှုန်းမှာ ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ၁၄ ရာခိုင်နှုန်းအသီးသီးရှိသည်။
ထို့ကြောင့်သင်၏ကုထုံးဆရာသည်မိမိ၏ဖတ်စာအုပ်များပြောဆိုရာကိုမှတ်မိနေခြင်းမှာအခွင့်အလမ်းသာဖြစ်သည်။ ဒါမှမဟုတ်သူကသူမစွဲလမ်းသူအဖြစ်သူ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအားဖြင့်သွား။ သူသို့မဟုတ်သူမအနေဖြင့်သင်ရင်ဆိုင်ရမည့်အကြီးမားဆုံးသောအန္တရာယ်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိနှိပ်မှုဖြစ်သည်။ အဲဒါမဟုတ်ဘူး။ ၎င်းသည်စွဲလမ်းမှု - သင်၏ ဦး နှောက်တွင်ရိုးသားဖြောင့်မတ်သောဘုရားသခင်ပြောင်းလဲခြင်းသည်သင်၏ ဦး နှောက်၏ပျော်ရွှင်မှုတုံ့ပြန်မှုနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။
မကြာမီကသုတေသနဒီထင်ရှားစေတော်မူပြီ။ တကယ်တော့, 2011 အတွက်စွဲလမ်းဆေးပညာ၏ American Society (3000 ဆရာဝန်များက) တစ်ဦးမှထွက်ထား အများပြည်သူကြေညာချက် ဒီကိုရှင်းပြခြင်းနှင့်အထူးသကြောင်းလိင်ဖျော နိုင် စွဲလမ်းပါစေ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျယ်ပြန့်ဆုံးအသုံးပြုသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေရေးလက်စွဲ၊ ရောဂါ၏နိုင်ငံတကာခွဲခြားရေး (ICD-11), သစ်တစ်ခုရောဂါ created porn စွဲများအတွက်သင့်လျော်သော: "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder။ "
အကယ်၍ သင်၏ကုထုံးဆရာသည် ဦး နှောက်ကိုစွဲလမ်းမှုဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာတွင်အထူးလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းမခံရလျှင်သင်မည်သူဖြစ်ကြောင်းရှာဖွေရန်အသင့်ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒီမှာယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံက
ငါသူမအင်တာနက်စွဲအပေါ်ကျွမ်းကျင်သူခဲ့ကြောင်းပြောဆိုသူတစ် ဦး ကုထုံးထံသို့သွားလေ၏။ ဒါနဲ့သူမကကျွန်မရဲ့ပြaboutနာအကြောင်းပြောပြပြီးသူကပုံမှန်အတိုင်းဘယ်လိုနေတယ်၊ ​​ငါတို့အားလုံးသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတ္တဝါများအကြောင်းဒီဟောပြောချက်ကိုပြောခဲ့သည်။ သူမသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုရှက်ရွံ့စွာခံစားစေပြီးကျွန်ုပ်၌စွဲလမ်းမှုမရှိဟုယုံကြည်ရန်ကြိုးစားသည့်ရှေးရိုးစွဲတန်ဖိုးများကိုဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့သည်။ အဆိုးဆုံးကတော့သူမကကျွန်တော့်ကို ၁၂ နှစ်အရွယ်လောက်ပြောခဲ့တာပဲ။ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာကကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအတွက်အချိန်အလွန်အကျွံသုံးစွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုသူမကပြောခဲ့သည်။ သူကကြက်ဥတွန်းတာကိုသုံးပြီးတစ်နာရီလောက်ထားခိုင်းတယ်။ နောက်မှသူမကိုကျွန်တော်တစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး
ကျွန်ုပ်၏နားမလည်နိုင်လောက်အောင်သော ED၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်လိင်စိတ်လုံးဝမရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆရာ ၀ န်သို့ ဦး ဆုံးအကြိမ်သွားသောအခါသူသည် testosterone ဟော်မုန်းစစ်ဆေးမှုကိုပထမဆုံးအမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာတဲ့အခါသူကကျွန်မကိုစိုးရိမ်စိတ်ကိုတားဆီးပေးတယ်။ မင်းရဲ့ခေါင်းထဲမှာရှိနေတာ၊ မင်းဒါကိုကိုယ့်ကိုကိုယ်သတိရဖို့လိုတယ်၊ ဒါကကူညီသင့်တယ်” \_ t တကယ်တော့သူကကျွန်တော့်ခေါင်းထဲမှာရှိနေပြီး၊ DID ကတကယ်တော့နည်းနည်းကူညီတယ်။ ဒါပေမယ့်သူကပြofနာရဲ့အရင်းအမြစ်ကိုမသိခဲ့ဘူး။ လပေါင်းများစွာအထိ ED ဆက်ပြီးလိင်ဆက်ဆံမှုကိုမအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ အားလုံးသည်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ NoFap သည်ယခုအချိန်အထိကူညီလျက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်ဖတ်ပြီးသောအောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းများ (နှင့်သူတို့အလွန်များပြားသောပမာဏ) မှကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီး၎င်းကိုအမှန်တကယ်ပြုပြင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုအကောင်းမြင်မိသည်။ ဒါကြောင့်မနေ့ကကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ် TEDx ဟောပြောပွဲ သူ့ကိုအယူအဆအကြောင်းနည်းနည်းပြောခဲ့တယ်။ သူကအရမ်းစိတ်ဝင်စားပုံရတယ်၊ သူတကယ်တော့ဒါကိုနာရီပေးမယ်လို့ငါထင်တယ် သူလုပ်မယ်ဆိုရင်သူကရုန်းကန်နေရတဲ့နောက်ထပ်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်အောင်ညွှန်ပြနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက် Highspeed အင်တာနက်က Porn (2013) တွေ့ဆုံ
Porn စီးရီးတွင်သင့်ရဲ့ဦးနှောက် (PowerPoint)
Erectile အလုပ်မဖြစ်နှင့် Porn (ပါဝါပွိုင့်)
TEDx Talk ကို
၏ယူကျု့ချန်နယ် နောဧသည် BE ဘုရားကျောင်း
ဂါယူဆပါသည်၏ယူကျု့ချန်နယ်: အဆိုပါ Reboot Nation
သင့်ရဲ့ကုထုံး porn အသုံးပြုသူများကိုအပေါ်လေ့လာမှုများဤစာရင်းများကို Give:
porn / လိင်စွဲလမ်းပေါ်တွင်စစ်မှန်သောကျွမ်းကျင်သူများက '' ထင်မြင်ချက်များ? ဤစာရင်းတွင်ပါဝင်ပါသည် 18 မကြာသေးမီကစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း & ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည်စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်။
porn နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ? ဤစာရင်းတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ porn အသုံးပြုမှု / ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal ချိတ်ဆက် 26 + လေ့လာမှုများပါရှိသည်။ အဆိုပါ အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်ပထမဦးဆုံး5လေ့လာမှုများကိုသရုပ်ပြ causation, သင်တန်းသားများအဖြစ် porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေ။
အဘယ်အရာကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုကောအသို့နည်း နောက်ထပ် Meta-analysis သည်: အထွေထွေပြည်သူ့အင်အားလေ့လာရေးအတွက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏အမှန်တကယ်တမန်တော်တစ်ဦးတွင် Meta-အားသုံးသပ်ခြင်း (2015).
ပွိုင့်ခြင်းနှင့်ချယ်ရီ-ကောက်ယူလေ့လာမှုကဒီကျယ်ပြန့်ဝေဖန်မှုကိုတွေ့မြင်ပြောနေတာနီးပါးတိုင်း naysayer တစ် debunking များအတွက်: "Debunkingအဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့ဆဲ Porn အကဲခတ်အကြောင်းဒါကြောင့်စိုးရိမ်နေ Are? "မာတီ Klein, တေလာ Kohut နှင့်နီကိုးလ် Prause (2018) က။ ဘက်လိုက်ဆောင်းပါးတွေကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့ကိုဘယ်လို: သူတို့ကကိုးကား Prause et al။ , 2015 (မဟုတ်မမှန်က porn စွဲ debunks ဟုဆိုကာ), ညစ်ညမ်းစွဲထောက်ပံ့3တစ်ဒါဇင်အာရုံကြောလေ့လာမှုများကျော်ချန်လှပ်စဉ်.
မကြာသေးမှီကအင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းမှုလေ့လာရေး Porn Include
သင့်ရဲ့ဖတ်စာအုပ်များဆမ်း: Docs လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစွဲကြမယ်, ။ စွဲလမ်းဆေးပညာအမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် DSM သဘောမတူရန်သဘောတူ
အဆိုပါဦးနှောက်အပေါ်လိင်: ဦးနှောက်ပလပ်စတစ်အင်တာနက်က Porn (2014),-Norman Doidge, MD အကြောင်းသွန်သင်အဘယျသို့
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်ထံမှ Neuroplasticity (အခန်းပေါ်-Norman Doidge ကိုယ်နှိုက်ကလည်းပြောင်းလဲဒါကဦးနှောက်)
ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကု Harry Fisch မှ“ The New အဝတ်အချည်းစည်း” (၂၀၁၄)
တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကို: ကမ္ဘာပေါ်တွင်အများဆုံးအသုံးပြုသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေရေးလက်စွဲ၊ ရောဂါ၏နိုင်ငံတကာခွဲခြားရေး (ICD-11), သစ်တစ်ခုရောဂါပါရှိသည် porn စွဲများအတွက်သင့်လျော်သော: "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder။ "(2018)
တို့က peer-reviwed စက္ကူ DSM-5 လိင်အလုပ်အဖွဲ့ကိုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရစ်ချတ် Krueger MD: ရောဂါအမည်ဖေါ်ခြင်း hypersexual သို့မဟုတ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ ICD-10 သုံးပြီးလုပ်နိုင်ပါတယ် နှင့် DSM-5 အမေရိကန်ဖွငျ့ဤရောဂါ၏ငြင်းပယ်ခံရပေမယ့် စိတ်ရောဂါအစည်းအရုံး
အမေရိက၏ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်သူများ (ASAM) သည်စွဲလမ်းမှုအဓိပ္ပာယ်သစ် (၂၀၁၁) ကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
ဆေးစွဲမှုအတွက်အမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်း - စွဲလမ်းမှုကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း (Long Version (2011))
စိတ်ကျန်းမာရေး (NIMH) ၏အမျိုးသား Institute မှ: DSM ချို့ယွင်းချက်များနှင့်ခေတ်မမီတော့ဖြစ်ပါတယ် (2013) ။
ကျေးဇူးပြု၍ အခြားအကြံပြုချက်များနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ သူတို့ကဒီ site မှဖြစ်ရန်မလိုပါ။